Tsy Mbola Nahita Boatin-Kira Mihitsy Talohan’ny Nifindrany Nankany Etazonia, Kalazan’ny Fanamboarana Azy Kosa Amin’Izao Fotoana Izao · Global Voices teny Malagasy
Tsy Mbola Nahita Boatin-Kira Mihitsy Talohan'ny Nifindrany Nankany Etazonia, Kalazan'ny Fanamboarana Azy Kosa Amin'Izao Fotoana Izao
Voadika ny 23 Mey 2016 16:51 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, 日本語, Español, English
Magdi Hanna, avy any Alexandria, Ejipta, mitana ny iray amin'ireo trano fiasana vitsy natokana hanamboarana jukeboxes ao Etazonia . Sary: Saul Gonzalez. Nahazoana alàlana.
Niseho voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 19 May 2016 ity lahatsoratra avy amin'i Saul Gonzalez ity, ary navoaka eto ho anisan'ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mora ny mieritreritra fa nilaozan'ny teknolojia hatreo ny vokatra sasany teo aloha. Rehefa dinihina tokoa, oviana ny fotoana farany nampiasainao ny milina fanaovana kajy na nanaovanao antso tamin'ny karatra misy “puce”?
Ary avy eo nisy ny boatinkira.
Raha mitodi-doha ho any Los Angeles ianao, sy ny andian-trano 2000 amin'ny Pico Boulevard, tadiavo ny fivarotana tantànin'i Magdi Hanna. Iray amin'ireo olona sisa kinga ao Etazonia natokana hanamboatra ny boatinkira izy. Ny iraka ataony? Hanavotra ny milina ho an'ny taranaka ho avy.
Avy any amin'ny seranantsambo Ejiptiana ao amin'ny tanànan'i Aleksandria i Hanna, tsy mbola nahita boatinkira izy raha tsy tonga tany Etazonia. Ankehitriny, antsoiny ho singa amin'ny tantaram-pirenena Amerikana ireo milina tranainy ampolotaonany maro, izay efa namboariny ny simba tao aminy nanomboka ny taona 1980.
Milaza i Hanna fa raiki-pitia tamin'ny boatinkira avy hatrany, ary nanapa-kevitra haingana ny hanokana ny androny manontolo hanamboarana ny simba amin'izy ireny. Tamin'ny taonjato faha-20, mbola hita teny amin'ny toeram-pandihizana, ny trano fisotroana sy ny trano fisakafoanana hariva ny boatinkira, – sary famantarana teo amin'ny fiainan'ny Amerikana, niaraka tamin'i Marilyn Monroe, ry Corvette na i Elvis ( misongadina ao amin'ny iray amin'ireo boatinkira ao amin'ny tsenan'i Hanna ny mozikany). Saingy ny milina izay voafetra ny fantina firaketana ao aminy dia tsy afaka mifaninana amin'ny fivoarana ara-teknolojia, izay niainga tamin'ny radio transistor niova ho kapila mangirana ka hatramin'izao fotoana izao, mazava ho azy, izay ahitana ny mozika ao amin'ny aterineto.
Jukeboxes ao amin'ny tsena fiasanan'i Magdi Hanna ao Los Angeles. “Tsy manana boatinkira izahay any Ejipta,” hoy izy. Sary: Saul Gonzalez. Nahazoana alàlana.
Foana niaraka tamin'ireo manam-pahaizana manamboatra ny simba amin'ny boatinkira noho izany ny orinasa mpanao boatinkira toy ny Wurlitzer sy ny Seeburg .
“Vitsy no fantatro “, hoy i Hanna. “Nefa tsy fantatro ny olona vaovao lasa manao raharaham-barotra boatinkira.”
Tsy mahagaga, tsy dia liana loatra amin'ny fomba fihainoana mozika vaovao i Hanna . “Raha mihaino an'i Elvis Presley amin'ny kapila 45 ianao, hafa tanteraka noho ny hafa renao amin'ny onjam-peo, na amin'ny kapila mangirana na amin'ny solosaina izany.” Lazainy fa mampita “feeling” kokoa ny kapila 45-rpm misy rakikira tokana.
Ny andro nitsidihako an'i Hanna, vao nahavita fanamboarana ny modelim-boatinkira 850 Wurlitzer nivoaka tamin'ny taona 1941 izy ny herinandron'iny. Nasehony ahy izany, nosokafany ny hazo tsara tarehy teo ivelany voasokitra vorombola miraikitra amin'ny fitaratra. “Jereo ny halehiben'ny maotera” hoy izy. “Tahaka ny alternatera amin'ny fiara.” Mila ampidirana 5 cents ny mandefa hira iray amin'ny boatinkira, izay mihazona rakipeo 24, 10 cents amin'ny hira roa, ary 25 cents amin'ny hira efatra. Mandefa hira amin'ny lafiny iray amin'ny rakikira ihany no azo ilalaovana aminy (modely tatỳ aoriana, izay namboarina tamin'ny taompolo 1950s, no nahafahana nandrakitra rakikira afaka mivadika sy mandefa ny andaniny sy ny ankilany).
Fitaovana fampiasan'i Magdi Hanna hanamboarana boatinkira ao amin'ny trano fiasanany ao Los Angeles. Sary: Saul Gonzalez. Nahazoana alàlana.
Matetika ireo mpanangon-javatra no mitondra boatinkira simba hitany tany amin'ny garazy sy trano amidy tamin'ny lavanty no mpanjifan'i Hanna. Misy fitoerana rakikira avy ny tsirairay izay tsy nisy nikitika am-polony taona maro, hoy izy. “Misy ny olona sasany nanana boatinkira tao amin'ny garazy efa ho 20 taona, ary manana rakikira tamin'ny taompolo '50 sy '60. Ôrizinaly ny hira ao aminy.”
Rehefa nanontaniana hoe: tahaka ny ahoana ny fahatsapanao rehefa velona indray ny milina toy izany, dia hoy Hanna hoe: “Oay, mahatsapa ho te handihy ianao!”
Rehefa feheziko ny fitsidihako ny toerana fanamboarana ny simba misy an'i Hanna, dia manontany azy aho raha afaka mifantina hira iray amin'ireo boatinkira izay namboariny. Eny, hoy izy. Nefa efa tany amin'ny taompolo 80 tany angamba aho no nampiasa jukebox (boatinkira) farany, nampientanentana kely ilay izy (nifidy an'ilay “My Special Guy” an'i The Six Teens aho).
Tahaka ny tsy mba mahafinaritra toy izany ny iTunes sy Spotify rehefa avy nihaino ilay hira avy amin'ilay milin'ny taona 60 aho.
Ny jukebox ao amin'ny trano fiasanan'i Magdi Hanna ao Los Angeles. “Nefa tsy fantatro ny olona vaovao lasa manao ny boatinkira (jukebox) ho raharaham-barotra” hoy izy. Sary: Saul Gonzalez. Nahazoana alàlana.